4Pcs / Lot ကာတွန်းပုံနှိပ်ထားသော Modal Mens Boxer Shorts - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
4Pcs / လောကာတွန်း Printed ပုံစံများ Mens Boxer ဇာတ်လမ်းတိုများ
အရွယ် L XL XXL XXXL
အရောင်21
4Pcs / Lot ကာတွန်းပုံနှိပ်ထားသောပုံစံ Mens Boxer Shorts - L /2backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: ပုံစံများ, လဲမှို့
အရောင်: အပြာ၊ အစိမ်း၊ မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊
အားသာချက် - ရှူရှိုက်နိုင်သော
အဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်: တွေအများကြီးနှုန်း4အပိုင်းပိုင်း
XXXL သည် 110 စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။ Qualität ist gut, သေNähte sind gut verarbeitet ။ အတွင်းပိုင်းဗားရှင်း3Tagen Versand ။ Versnzeit သည်2Wochen နှင့်ဆိုင်းငံ့ထားသည်။
Gostei bastante tecido လုပ်ပါ။ Tem um ótimo acabamento no corpo ။ Chegou dentro do prazo previsto de entrega ။ cores အနေဖြင့် vivas como nas fotos ။ Muito bom ။
Трусыхорошие! ပုံမချရသေးသော။ အကြံပြုသည်။
Трусысмешные။ Качество, каквсегда
အလွန်လျှင်မြန်စွာပေးပို့! ပင် 11.11 (အလုပ်များအချိန်) ရက်နေ့တွင်ဝယ်ခဲ့သည်။ အံ့ quality စရာကောင်းတဲ့အရည်အသွေး, ငါပထမ ဦး ဆုံးဆေးကြောပြီးနောက်လုပ်သောရဲ့ဓာတ်ပုံများကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ panties အရောင်ကမပြောင်းဘူး၊ ပုံနှိပ်တာကိုမဖျက်ဆီးဘူး ထို့အပြင်အပ်ချုပ်အရည်အသွေးကကောင်းပါတယ်။ ပစ္စည်းများပျော့ပျောင်းသည်, ရာဘာခါးပတ်လည်းကောင်းလှ၏။ အားလုံးကောင်းပါတယ် ငါဝယ်ယူမှုနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ သေချာတာပေါ့ဒီစတိုးဆိုင်နှင့်ဤအမှတ်တံဆိပ်ကနေပိုပြီးဝယ်ပါလိမ့်မယ်။